(Akhriso):-Wiil u dhashey Dalka Arjantiin Oo Dukaan Ukun ka Qaatey Maxaa Xiga…. – Hareerley News
Wiil u dhashay dalka Arjantiin ayaa galay dukaan lagu iibiyo Ukun markii sallad ukun ah uu soo dajistay ayaa milkiilihii ku war galiyay in qiimihii hore wax iska badaleen oo uu qiimo ku darsamay..!!!
Isaga oo aan erey dhihin ayuu ku celiyay Ukunta halkii uu ka soo qaadat,deetana yiri “La”aanteed waa noolaan karaa”..!!!
Qiima kororkaasi waxaa sidaasi oo kale iska diiday dhammaan shacabka oo yiri Ukun la’aanteed waa noolaan karnaa..!!!
Shirkadihii Ukunta u qeybin jiray Dukaamada magaaladaasi ayay farrintii gaartay, waxa ayna madaxda shirkadaha Ukunta ka macaashaa ay isku raaceen in aan dhag jalaq loo siin oo laba maalmood ka dib ay sandullo ku noqon doonto shacabka in ay u hogaan samaan qiima kororka lagu sameeyay Ukunta , laakin la’mood noqosa weyday.
Dukaamadii waxa ay iska diideen in ukun loo soo dajiyo oo waxa ay ku war galiyeen shirkadaha Ukunta in cid ka iibsataa Ukuntii hore la’la’yahay…!!!
Ugu dambeyn madaxda shirkadaha Ukunta ayaa kulan deg deg ah isugu yimid waxa ayna soo saareen qodobbo ay ka mid yihiin:
1.in raali galin la’siiyaa shacabka
2.in qiimaha ukunta laga hoos mariyaa kii ay ku iibsan jireen.
Bal kabaha ugu jiro shacabka Dalka Arjantiin nagu jimeeya, tolow manala egyihiin.?!!!
Allow hanaga dhigin shacab xaalkiisu yahay Lax dhukan col iyo abaar moog.!!! Aamin.
W/Q :-Aweys Xasan Maxamed.
Ergeyga IGAD Ee Soomaaliya Oo Kulamo Caawa Ka Wada Kismaayo